That's so good, right?: ကိုယ်တွေ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်
ကျတော်က သိရီလိကာင်္နိ်ုင်ငံသား Sujaen(ဆူဂျန်) ပါ။
အသက်က၄၄နှစ်၊ သားသမီိးသုံးယောက်ရှိတဲ့ အိမ်ထောင်သည် ဗိသုကာ အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်ပေါ့။ စကာင်္ပူတရုတ်တန်းနားက နာမည်ကြီး ကုမ္မနီကြီးတစ်ခုမှာ မလေးရှားနဲ့ သီရိလကာင်္နိုင်ငံရုံးခွဲတွေအတွက် အလုပ်လုပ်နေတယ်လေ။ မိသားစုကို မတွေ့ရတာကလွဲရင် တင့်တင့်တယ်တယ် ထားပေးနိုင်သည်သာမက ကိုယ်တိုင်လည်း ပြေပြေလည်လည်ရှိပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။
သောင်္ကြာနေ့ခင်းပိုင်း ၁ နာရီလောက် People’s Park Complex ရုံးခွဲကို အစီရင်ခံစာတင်ပြီး ကိုယ့်ကွန်ဒိုဆီ နားဘို့အပြန် တရုတ်တန်းဘက်က မြေအောက်ရထားအ၀င် လှေကားဘက်ကို ဦးတည်ဖြစ်ခဲ့တာ ကောင်လေး ခပ်မိုက်မိုက်တွေ အဖော်ခေါ်လို့ရကြောင်း မနေ့ညအင်တာနက်ကြည့်ရင်း သိထားလို့ပါ။ နာမည်ရနေတဲ့ Cruising Area တဲ့။ ခပ်သွက်သွက် ခြေလှမ်းလိုက်မိတယ်။
အရွယ်ငယ်တဲ့ ကောင်လေးချောချောတွေ အဖွဲ့လိုက်စကားပြော ရယ်မောရင်းသော်လည်းကောင်း၊ တစ်ယောက်တည်းရပ်၊ ဖုန်းကလိရင်း သွားလာနေသောလူတွေကို စိုက်ကြည့်လိုက် ဖုန်းပြန်ကလိသော ကောင်လေးများ၊ ခပ်တည်တည်ရပ်နေသူများ၊ ဆေးလိပ်သောက်သူကသောက်၊ ဖုန်းပြောသူပြော၊ ကိုယ့်အထာနဲ့ကိုယ် နေကြသူများ။ မလေး၊ အင်ဒို၊ တရုတ်နဲ့ ဖိလိပိုင်တွေ ပြီးတော့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းက ပါးသိုင်းမွှေးနဲ့ အသားညိုညို ကျစ်နေတဲ့ အိန္ဒိယအဆင်တွေ၊ တောင့်တင်းကျစ်လစ်သူ၊ ခပ်ပိန်ပိန်တွေ၊ အလယ်အလတ်မပိန်မဝတဲ့ဘဲတွေ၊ မျက်လုံးမှေးမှေးလေးတွေနဲ့ စုံညီနေတာ အံ့သြမိတာအမှန်ပဲ။ ၂၅ နှစ် ၃၀ နဲ့ ၃၅၊ ၄၀ ဝန်းကျင်တွေ အဝတ်အစား အပြင်အဆင်ကြောင့် တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ အရွယ်တင် ကြည့်ကောင်းနေကြပါတယ်။ နေ့ခင်းထမင်းသားချိန်မို့ လူတွေပိုများနေသလို တစ်ချို့တွေကကျနော့်ကို ခပ်ရဲရဲစိုက်ကြည့်နေတာ တစ်မျိုးသောခံစားချက်ပဲကွာ။
ခပ်မှန်မှန်လျှောက်ငေးရင်း တိုင်ကြီးတစ်တိုင်အောက်မှာ ကောင်လေးတစ်ယောက် ဘေးစောင်း မှီထိုင်နေတာကို တွေ့လိုက်တယ်ဗျ။ အနီ နက်အကွက်လမ်းလျှောက်ဘွတ်ဖိနပ်လေးစီးပြီး အနက်ရောင်ဘောင်းဘီ အတိုလေးကို အရုပ်ဖြူလေးတွေရေးထားတဲ့ ရှပ်အနက်ရောင်လက်ရှည်အကျပ်လေးနဲ့သူဟာ တစ်ကယ့်ကောင်လေး လေးတစ်ယောက်၊၂၀၊ ၂၁ကျော်ကျော်သာရှိဦးမယ်ဆိုတာ ကျနော်အလိုလိုသိနေပါတယ်။ ပါးလေးမဖောင်းတဖောင်းနဲ့ ဆံပင်အရောင်ဆိုးတာလေးရယ်၊ တောင့်တင်းတင်းမဟုတ်ပေမယ့် ဖွံထွားနေဆဲ ခန္ဒာကိုယ်လေးရယ်၊ အသားသိပ်မဖြူ မညိုသော မျက်နှာအနေအထား၊ လူတွေမလှမ်းမကမ်းမှာ ထိုင်ငေးနေတဲ့ ကောင်လေးကို ဘာလူမျိုးမှန်းမခန့်မှန်းတတ်၊ ကပြားလားမသိတဲ့ ရုပ်လေးကို တော်တော်သဘောကျမိတာ ဝန်ခံပါရစေ။
ကျနော့်အကြည့် တွေကြောင့်လားမသိ၊ ကျနော့ဘက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်မှ မျက်လုံးချင်းဆုံသွားတယ်။ ကျနော်ချက်ချင်း မျက်နှာလွှဲလိုက်ပေမယ့် သူမျက်လုံးထဲက စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို မြင်ဖြစ်အောင်မြင်လိုက်တယ်ဗျ။ အော် ဤအရွယ်ကောင်လေး ဘာတွေဘာကြောင့် စိုးရိမ်နေသလဲ သိချင်စိတ်တွေရဲ့စေ့ဆော်မှုကြောင့် ပြန်ကြည့်ဖြစ်ပေမယ့် သူကျနော့်ကို ကြည့်မနေတော့။ သူ့ဆီကိုခြေလှမ်းတွေ အလိုလိုလှမ်းလိုက်မိပြီ။ ခြေသံကြားကြောင့် သူ့အကြည့်တွေက ကိုယ့်ဆီမှာပြန်လည်လာမှ ကျနော် ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။ ချာတိတ်လေးပြန်ပြုံးပြလိုက်မှ ချစ်ဘို့ကောင်းလှတဲ့ ထိုကောင်လေးကို ခေါ်ချင်တဲ့စိတ်တွေ တားဆီးမရဖြစ်ရပြီပေါ့။ ကိုယ်ကအကြီးဆိုတော့ စပြောရမှာလေ။
‘နေ့လည်စာသွားစားမယ်ချာတိတ် (Little Boy)ကိုယ်ခေါ်သွားမယ် လိုက်မလား?’
သူနားလည်မလည်တော့ မသိ Macdonal's ဘက်ကိုလက်ညိုးထိုးပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။
သူ့အင်္ဂလိပ်စကားက တော်တော်နားထောင်ကောင်းတယ်ဗျ။ ကြားနေကျ စလုံးအင်္ဂလိပ်မဟုတ်။ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး သဒ္ဒါကျကျ ၊ လေယူလေသိမ်း၊ အသံအဖြတ်အတောက် သာယာစွာ ပြန်ပြောတတ်သော ကောင်လေးကို ထပ်ပြီး သဘောကျ ရပြန်ပြီ။
ဆိုင်ထဲ စားစရာတွေမှာဝယ်၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီး စားသောက်ရင်း သူ့အကြောင်း မေးကြည့်လိုက်တော့ ထင်ထားတာထက် ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဗျ။ ရိုသေမှုအပြည့်ပါသော ပုံမှန်အမူအရာလေးတွေ၊ ကိုယ့်မျက်လုံးထဲ သေသေချာချာကြည့်ပြီး စကားပြောသောပုံစံကို ခန့်မှန်းအကဲခတ်ရတာပျော်သလိုလိုပါ။
နာမည် ကာရံ၊ ၂၂နှစ်၊ မြန်မာ ကောင်လေးတစ်ယောက်၊ မြန်မာပြည်က ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်ရင်း သင်တန်းကြောင့် စကာင်္ပူရောက်နေခြင်းပါ။ သင်တန်းသုံးလ ပြီးသွားပါပြီ။ ရန်ကုန်ကို ပြန်ချင်ပေမယ့် သင်တန်းဆင်း လက်မှတ်မရတာနဲ့ ခေါင်းခဲနေလေရဲ့။ စကားအများကြီးမပြောပဲ စားသောက်နေပုံက ဗိုက်တော်တော် ဆာနေတယ်ထင်တယ်။ မေးချင်ပေမယ့် မမေးဖြစ်ပါဘူး။
‘၁ရက် ၂ညလောက် ကိုယ့်ကိုပြုစုဘို့ လိုက်မလား ချာတိတ်။ ကိုယ်အင်ဒိုနီရှားက Batam (ဗာသမ်ကျွန်း) သွားစရာလေးရှိလို့။ ကိုယ်မင်းကိုတာဝန်ယူမယ်’
ကောင်လေးကျနော့် မျက်လုံးအဆုံးသေချာကြည့်ရင်း စဉ်စားပြီးခဏငြိမ်နေတယ်။ ကျနော်ဆက်ပြီး
မင်းက မြန်မာဆိုတော့ ဗီဇာလုပ်စရာမလိုဘူးလေ။ ကိုယ်အလုပ်လုပ်ချိန်မင်း ဟိုတယ်မှာနေခဲ့ပေါ့၊ အလုပ်ကမများပါဘူး။ ဘယ်လိုလဲ အဆင်ပြေလား? ကိုယ်မင်းကို သဘောကျလို့ ။
သူ့သဘောတုညီမှုရလိုက်တာ ဘာကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမိမှန်းမသိ။ သူကိုယ့်ကို ဘယ်လိုများ ပြုစုမှာလည်းလေ။
ဖုန်နံပါတ်ယူထား ညနေ ၄နာရီ Harbour front MRT မှာကိုယ်စောင့်နေမယ်နော် ချာတိတ်။
ကျနော်အိမ်ပြန်ထုပ်ပိုးပြီး သူနဲ့ချိန်းထားတဲ့ မြေအောက်ရထားဂိတ်ကိုသွားပါတယ်။ ဗာသမ်ကိုရောက်ဘို့ ၄၀ မိနစ်လောက် အတူတူသဘောင်္စီးသွား၊ အင်ဒိုလ၀က ဖြတ်ဘို့တန်းစီ၊ အငှားကားစောင့်ပြီး ကျနော်တို့တည်းမယ့် ဟိုတယ် (HARRIES Hotel Batam Center) အရောက်မှာ နာရီကြည့်လိုက်မိတော့ ၈နာရီထိုးပြီ။
ဗိုက်ဆာနေပြီလားချာတိတ် ရေချိုးပြီးမှ လိုအပ်တာလေးတွေ ၀ယ်ရင်းအပြင်ထွက်စား ကြမယ်နော်
အခန်းယူပြီး ရေချိုးခန်းကို အရင်ဝင်လိုက်ပါတယ်။ ငေးရင်း ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နေပုံက ကလေးတစ်ယောက် လူကြီးစတိုင်ဖမ်းနေလို့ ကိုယ်သဘောကျ ပြုံးလိုက်မိသေး။
Mini Mart မှာလိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင်လေးတွေဝယ်ပြီး ညဈေးတန်းမှာ အင်ဒိုရိုးရာစာ စားဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့် အတွက် ဇွန်းသုတ်၊ စားစရာနယ်၊ ငါးရိုးနွှင်ပေးတဲ့ကောင်လေးကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ ပုံမှန်ပါပဲ၊ ကိုယ်ကတော့ဘာကြောင့်မှန်းမသိ အလိုလိုပျော်ပြီး သူလုပ်သမျှကို နှစ်သက်နေမိတယ်လေ။ လမ်းလျှောက် ငေးကြည့် ရင်း ဟိုတယ်ပြန်ရောက်တော့ ၁၀ ကျော်နေပါပြီ။
ကိုယ့်အ၀တ်အစားတွေချွတ် အစဉ်တကျထားပြီး ညအိပ်ဝတ်စုံ ထုတ်ဝတ်ပေးသော ထိုကောင်လေး အပြုအမူကြောင့် စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေတာ အတွေ့ အကြုံမရှိသူလည်းမဟုတ် ငါ့နှယ် ငတ်နေလို့များလား? ရေချိုးခန်းဝင်သွားတဲ့ အ၀တ်မဲ့ နောက်ကျောပြင်လေးကို ငေးရင်း စိတ်တွေနိုးကြားလာတာ ရေငတ်သလိုလို လက်တွေခြေတွေတုန်လာသလိုလို ရေချိုးခန်းမှာကြာနေသလိုလို ဘာကြောင့်လောချင်နေတာလဲ မသိတော့။
ပါးပြင်လေးကိုပထမဆုံးသူ စနမ်းလိုက်တာ သိပ်တော့ထူးခြားမှုမရှိ။ ပြီးမှလည်ပင်းဂုတ်သား ဒီနေရာမှာတော့ သူ့ရှူထုတ်လိုက်တဲ့ လေနွေးနွေးရယ် နူးညံ့တဲ့ နှုတ်ခမ်းသားအထိကြောင့် ကြက်သီးထ ရင်ဖိုရပါတယ်။ နှာခေါင်းထဲက ထွက်လာတဲ့ လေနွေးနွေးတွေက ကိုယ့်ကိုသာယာစေတာ ကောင်လေးအသေအချာသိမှာဗျ။ အောက်ပိုင်းကို တဖြည်းဖြည်းဆင်းနေသော သူ့အထိအတွေ့က နို့သီးလေးတွေမှာ ကိုယ့်စိတ်တွေလွတ်လောက်အောင် သာယာစေတာ ကောင်လေးရဲ့လျှာပူနွေးမှု အလှုပ်အရှားကြောင့်လား? ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်လား? ကိုယ်ကပဲ သူ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို ရူးသွပ် တပ်မက်လို့ပဲလား? အဖြေရှာနေပေမယ့် ကိုယ့်နို့သီးတွေ ခပ်ဖွဖွကိုက်ချလိုက်တဲ့ ကောင်လေးရဲ့ သွား အထိအတွေ့မှာ နာကျင်တာထက်ပိုသော ယားကျိကျိခံစားမှုကြောင့် အဖြေမထွက်။ အား ဆိုသော်အသံသာ။
ကောင်လေး မော့်ကြည့်လာပြီး ဘယ်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကို မှိတ်ပြလိုက်တာ ကိုယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်း မသိတော့ စိတ်လွတ်သွားပြီ။ မျက်နှာကိုလက်နဲ့ ဆွဲပြီးကောင်လေးပါးစပ်ထဲကို လျှာထိုးထည့်လိုက်မိပါတယ်၊ အမှတ်မထင် ခပ်ကြမ်းကြမ်း စလှုပ်ရှားလိုက်တော့ ကြောင်သွားပေမယ့် အလိုက်သင့် ပြန်ကြမ်းလိုက်မှ စိတ်အလိုဆနက ပိုကြွလာသလိုပါ။ လက်ကိုအငြိမ်မထား ဟိုပွတ်ဒီထိ လုပ်လိုက်သေး။ ကိုယ့်ဒုတ် ကိုကိုင်လိုက်မိမှ အနမ်းကိုရပ်ပြီး ကြည့်လိုက်တော့ လန့်သွားတာ သေချာသိလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာက ကောင်လေးတွေ့ဘူးသမျှမှာ အကြီးအရှည် ထိပ်တန်းစရင်းပြုစုမယ်ဆို ပါကိုပါရမယ့်အရွယ်အစားပါ။ ဒီတစ်ခုဟာလည်း ကိုယ့်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်အ၀ရှိစေတာ။
ပြောလည်းပြော သေချာစေ့စေ့ကြည့်နေသောကြောင့်ရှက်ရပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သူပါးစပ်ထဲကိုထည့်လိုက်မှ အရှက်တွေအစား သာယာမှုတွေ တိုးဝင်လာတာ ကောင်လေးသိနေပြီးသားလား။ ပူနွေးမှု တစ်ခုတည်းမဟုတ် လျှာ၏ အလှုပ်အရှား ၊ ညင်သာနူးညံ့သော အထိအတွေ့များစွာ ခံစားရန် ကိုယ်ခံနိုင်ရည် လိုအပ်သေးတာ သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။ တစ်ချက်တစ်ချက် အာခေါင်ထဲ အရောက်မျိုလိုက်တိုင်း အရသာထူးလွန်းသောကြောင့် ပြီးချင် သလိုလိုတောင်ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒီလောက် လုပ်တတ်တဲ့ ကောင်လေးကို အံ့သြရသလို၊ တစ်ဖက်မှာ သူအတွေ့အကြုံကို မနာလိုစိတ်တွေ ဖြစ်ရပြန်ရော။ ဘယ်သူတွေကိုများ ဒီလိုတွေ ……….
ဥတွေ လျှာဖျားလေးနဲ့ ကစားပေးနေတာလား၊ လျက်ပေးနေတာလား ပေါင်ကြားထဲ တစ်ချက်တစ်ချက် ထိလာသော အရသာက ယားသလိုလို၊ ကောင်းသလိုလိုနဲ့ စိတ်ကိုအလိုမကျဖြစ်စေတာလား။ အဓိကနေရာချန်ပြီး မလိုအပ်တတွေ လုပ်နေသူလို့ ပြောပစ်လိုက်ရင်ကောင်းမလား? အလိုလည်းမကျ ကောင်းလည်းသေမလောက် ကောင်းနေတာ ဘယ်လိုအောင့်ပြီး ခံစားရမလဲမသိ။ ပေါင်သား၊ ဒူးရည်တွေ ခပ်ဖွဖွကိုက်ရင်းလျက်ရင်းနဲ့ ခြေမအရောက်မှာတော့။ ထပြီးဘယ်လိုလုပ်သလဲ ကြည့်မိပါပြီ။
ခြေမကို ငုံရင်း သွားကြီးတွေနဲ့ ဖြည်းဖြည်းကိုက်၊ ခြေချောင်းကြားလေးတွေကို လျှာနဲ့လျက်နေတာ အသည်းထဲထိအောင် ယားပြီး စိတ်တွေ ရှိသမျှအားကုန်သုံး ထိန်းနေရတာမလွယ်လှ။ အားရှိပါးရှိ ဆောင့်ပြီးရင်ခွင်မှာ အသက်ရှူခက်လောက်အောင် တင်းတင်းဖက်ထားလျှင်ကော?ဘယ်လို လုပ်နေတာလဲ ကောင်လေးရာ၊ ကိုယ်မနေတတ်ဘူးကွာ အား၊ မနေနိုင်တော့ဘူး။ ဒီလိုအနုသုခကြောင့် သေကြကြေးဆိုလျှင် ကိုယ်သေပဲ သေလိုက်ပါရစေ ချာတိတ်လေး။
အစွပ်စွပ်လိုက်တော့ ချာတိတ်။ ကိုယ်မင်းလုပ်တာတွေ ကောင်းလွန်းလို့ မချရပဲ သေသွားရင် နှမျောလို့ မြန်မြန်လုပ်မယ်။
အစွပ်ယူဘိုကုတင်အောက်ဆင်းသွားသော သူနောက်လိုက်ရင်း စားပွဲးနားမှာ သူ့ကိုချုပ်လိုက်ပါတယ်။ အရည်ဘူးထဲက အရည်အရင်ညစ်၊ ကိုယ့်ပစည်းလိမ်းပြီးမှ အစွပ်စွပ်ပေး၊ ပြီးမှ ရွဲနေအောင် အတံကြီးကြီးပေါ် လောင်းချလိုက်တယ်ကွ။
နံရံကိုမျက်နှာချင်းဆိုင် ရပ်စေပြီးတော့ဖင်သားတွေကို နယ်ပေးလိုက် ခြေထောက်ကား ခါးကော့ခိုင်းပြီး လက်နဲ့တေ့ရင်း ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆောင့်လိုက်ပါတယ်။ မ၀င်ပါ။ လွဲသွားလေရဲ့။ဘယ်ဝင်မလဲဗျာ ကိုယ့်ဆိုဒ်က Large တောင်မဟုတ် Extra Large လေ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ တစ်ချက်တည်းမှာ အားနည်းနည်းထည့် ဆောင့်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ ကောင်လေးရဲ့အော်သံဟာ နာကျင်မှုကြောင့်လား သာယာမှုကြောင့် လားအဖြေမရှာအား၊ ဒါတောင်နည်းနည်းလေးပဲဝင်သေးတာ၊ ဖင်သားတွေဆုပ်ကိုင်ရင်း မလှုပ်ရှားပဲ ခဏနားပြီးမှ ဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ချက် အားထည့်ရင်း အဆုံးထိဝင်ရန်တစ်ချက် ကြမ်းလိုက်နုလိုက်ဆောင့်တာ တစ်ဝက်ကျော်ကျော်ဝင်သွားပြီဗျာ ။ ကျပ်လည်းကျပ် ကောင်းလည်းကောင်းပေမယ့် ကျင်တာလေးတစ်ခုက သူ့အပေါက်လေးကြောင့် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ကောင်လေးညင်းသံလေးတွေက တိုးလိုက် ကျယ်လိုက်နဲ့ နားထဲမှာကြားရတာ အရမ်းကောင်းလှတယ်ဗျာ ။ ကိုယ့်ပေါင်သားတွေ ကိုင်ရင်း နံရံကိုမှီထားတဲ့ သူ့ပုံစံလေးဟာ တကယ်ကိုဆွဲဆောင်မှု အပြည့်ပါ။
Sir,Don’t stop right there. I beg you. Please move yours harder.
သူ့တောင်းဆိုမှုတွေက စကားလုံးလှလ၊ှ အသံထွက် ပီပီသသအောက်မှာ ပြင်းပြသောဆနအလုံးအရင်း ပျော်ဝင်ပြီး ကိုယ့်အကြားအာရုံကြောကနေ လှုပ်ရှားချင်စိတ်ကို ချက်ချင်းအကြိုးသက်ရောက်စေပါတယ်။ အား အဆုံးထိ တစ်ချက်ခပ်ပြင်းပြင်း ထိုးထည့်လိုက်ပြီ။ အရမ်းမိုက်တဲ့ အရသာဟာခံစားဘို့များလွန်းလို့ မနိုင်မနင်း ဖြစ်လိုက်သေးတယ်ဗျ။ လေ၀၀ရှူရင်း အားဆိုပြီး အော်လိုက်မှ နေသာအဆင်ပြေသွားတယ်ဗျာ။
တစ်ခါတစ်ခါကော့ပေးရင်းနဲ့ ကိုယ့်အဆောင့်ကိုပြန်ခံပေးတာ အရမ်းကောင်းတဲ့ခံစားမှုတွေပါပဲ။ ကောင်လေးရဲ့ ကျပ်တည်းနွေးထွေးတဲ့ အထိအတွေ့၊ ညင်းညူသံ၊ ခိုးခိုးကြည့်တဲ့သူ အကြည့်တွေ၊ သူ့ခါးသိမ် ကိုင်ဆောင့်နေရင်း စိတ်ထဲတစ်လှပ်လှပ်ခံစားမှုတွေက ကိုယ့်ရင်ထဲကနေ လိုလိုလားလားနှစ်နှစ်ကာကာ အကြိုက်တွေ့နေတာ မဆိုစလောက်ညောင်းလာမှ ကြာတောင်ကြာနေပြီလား ဆိုတဲ့အတွေးတွေ ၀င်လာပါတယ်။ အမှန်တကယ်ဆို ညောင်းတာက နည်းနည်း ကောင်းတာက အတိုင်းထက်လွန်ပိုတာဗျ။ အသည်းယားစရာကောင်းလွန်းတဲ့ ကောင်လေးအမူအရာတွေကြောင့် သူ့နားကို ပါးစပ်ထဲထည့်ပြီး နားပေါက်ထဲလျှာ ထိုးထည့်လိုက်မိပါတယ်။ သူ့လက်တွေကလည်း ကိုယ့်တင်ပါးကို သူ့ဘက်ဆောင့်ချဘို့ အားပေးလျက်ပေါ့။
ရုတ်တရက် ကောင်လေးကုန်းချလိုက်မှ ကိုယ်တို့ဆက်နွယ်မှု အရသာ တမျိုးပြောင်းသွားတယ်လေ။ ကိုယ့်ဥတွေကို လက်လှမ်းလိုက်ချိန်မှာတော့ စိတ်ထဲကနေ ထိန်းချုပ်ချင်စိတ်တွေ ကုန်ခမ်းသွားသလိုလိုပါ၊ မရဘူး ထိန်းထားရမှာပဲ၊ ဆောင့်ချက်တွေကိုနှေးပစ်ရင်း အထွဋ်ထိပ်ရောက်ကမ်းကပ်ဘို့ အချိန်ဆွဲနေဆဲပါ၊ ၀တယ်ဆိုတာ ရှိရိုးလား ဒါမျိုးမှာ၊ ပြောပါဦး ချာတိတ်ရ မင်းက အရမ်းမိုက်နေတာ အရမ်းကောင်းနေတာကိုးကွ။ ဖတ်.. ဖတ် ဖတ် ကိုယ့်ရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေ ကောင်လေးရဲ့တင်ပါးနဲ့ တွေ့လိုက်တိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန် ထွက်လာတဲ့ အသံကလည်း ပျံ့လွင့်နေသေး။ သူအိုးကိုယ့်ဘက်ကို အားပါပါ ခပ်နာနာလေး ပြန်ပေါက်လိုက်ချိန်တိုင်း အဆုံးထိ ၀င်သွားတဲ့အတံဆီက သာယာတဲ့ခံစားချက်တွေဟာ ဒီစာလောက်နဲ့တော့ မဖွဲ့လောက်ဘူးဆိုတာ ချာတိတ်ကို သိစေချင်ပါတယ်။
အာရုံကြောတွေရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုတွေ၊ ပိုပိုအားရစရာကောင်းလာတဲ့ အပေးအယူ အထိအတွေ့များ၊ နူးညံ့ပူနွေးသော ချာတိတ်လေးရဲ့ အတွင်းဘက် ကြွက်သားနံရံ ညှစ်ယူမှုတွေ၊ သုခခံစားမှုအကျိုးအဆက်အဖြစ် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အသံပလာများစွာဟာ ကိုယ့်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုစွမ်းကို တဖြည်းဖြည်းတိုက်စားလျှက် အရှုံးပေးစေချင်နေပြီ။ ကိုယ်အရှုံးခံလိုက်ရမလား ? တင်းခံနိုင်သမျှ အားတင်းလှုပ်ရှားရမလား ဆုံးဖြတ်ရခက်နေချိန် ကောင်လေးမျက်နှာကို အကြည့်တစ်ချက်ပို့လိုက်ပါတယ်။ အရမ်း သာယာနေသောမျက်လုံးမှာ မှေးမှေးပြီး အသက်၀၀ ရှူနေပုံတို့ကြောင့် ထိန်းချုတ်မှုဆည်ကျိုးသွားပါပြီ။
ကိုယ့်ဒုတ်ထွားသွေးကြောအတွင်းမှ အာရုံကြောသို့ သာယာသောခံစားမှု လှိုက်ကနဲတက်လာကြတာ လုံးဝအမိုက်စားပါ။ဟင်း ဟင်းအသံထွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ် အရှိန်များနှင့် တစ်စက်ချင်းပန်းထွက်လာသော အရည်ချွဲစက်များသည်လည်း နှလုံးခုံသံနှင့်အတူ ချာတိတ်၏လျှို့ဝှက်ထားသော အတွင်းပိုင်းဆီသို့၊အားပိုပါသော ဆောင့်ချက်များစွာနှင့်အတူ ကိုယ့်ကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်မှာ အသက်ရှူရန်ပင် ခဏတာ မေ့သွားစေပါတယ်။ ပန်းထုတ်လိုက်သောတုန်ခါမှုတိုင်းကို အားရပါရ ညှစ်ချပေးသောကောင်လေး အတွင်းသား နွေးနွေးများကြောင့် အရသာ ပိုကောင်းတာ ၀န်ခံပါရစေ။အစက် တစက်မှမကျန်စေရန် ကောင်လေးအတွင်းသို့ အဆုံးထိနှစ်ပေးလိုက်တာ အချိန်ကြာသလားမသိတော့၊ အပေးတော်တော် ကောင်းသော ချာတိတ်လေး လူးလွန်လာမှ အသိစိတ်ဝင်ကာ ချာတိတ်ပါး မဖောင်းတဖောင်းလေးကို နမ်းလိုက်မိတယ်ဗျာ။ ကိုယ့်ဟာကို ကောင်လေးအတွင်းမှ ထုတ်ပစ်လိုက်ဘို့ နှမြောနေမိတာ ဘာကြောင့်လဲ?။ သေချာတာက ထပ်လိုချင်နေဦးမယ်ဆိုတာပါပဲ ကိုယ့်နောင်တော်လည်း နည်းနည်းပျော့သွားသည်မှအပ မာန်ဖီနေဆဲ အကြောများသွေးပြည့်နေဆဲ သန်ဆဲမာဆဲလေ။ နောက်တစ်ချီ ပြန်လုပ်လိုက်ရုံပေါ့။
အစွပ်သေချာပြန်ဖြုတ်ပေးပြီး ကိုယ့်လက်ကိုင်ဆွဲ ရင်းရေချိုးခန်းမှာ သေချာလေးပြန်လည်သန့်ရှင်းရန် လုပ်ကိုင်ပေးနေသော ကောင်လေးပုံစံကို ကြည့်မ၀ နှစ်သက်စိတ်တွေ မသိစိတ်နဲ့ အသိစိတ်ထဲဖြစ်ပေါ်နေတာတစ်မျိုး၊ ကောင်လေး၏ အပြူအစုကိုခံစားရဘူးသော၊ ခံစားရဦးမည့်ငနဲသားတွေကို မနာလိုစိတ်တွေဖြစ်နေတာကတစ်မျိုး၊ ကောင်လေး အပြုအစုကို ပူမိုင်ယူထားချင်သော အတစိတ်ကတစ်မျိုး စသဖြင့် ကသိကအောင့် ဖြစ်နေတာ ချာတိတ်လေး သိစေချင်သလို ရိပ်မိမှာလည်းစိုးရိမ်ပါတယ်ဗျာ။
ကုတင်ပေါ်ကိုယ့်ကို မှောက်ခိုင်း၊ ဆီတွေလောင်းရင်း နှိပ်နယ်ပေးတာ အားပါ ထိမိရုံမဟုတ်။ ကျစ်လစ်သောကိုယ့်ခနာ အကြောများပြေစေရန် စေတနာပါပါ နှိပ်နယ်ပေးနေသည်မှာ ကောင်းလွန်းသောကြောင့် ဘယ်အချိန်က အိပ်ပျော်သွားသည်ကိုပင် မသိလိုက်တော့ပါ။ အိမ်မက်တောင် ထိုညက အရမ်းလှနေခဲ့သည်လေ။
တစ်ရေးနိုး ဖုန်းနာရီကြည့်မှ မနက် ၆နာရီထိုးနေပြီ။ ဘေးနားမှာ အသက်မှန်မှန်ရှူ အိပ်ပျော်နေသော ကိုယ့်ချာတိတ်မျက်နှာလေးက ပက်ိကြည်လင်ပြီး ငယ်ရွယ်ဂုဏ်လေးနဲ့လှပနေတာ ဘာကိုကျေနပ်မှန်းမသိပဲ ပြုံးလိုက်မိပါတယ်။
အိပ်ရာထ ရေချိုးခန်းအသွား ကောင်လေးအိတ်ကို ဖွင့်ကြည့်ချင်စိတ်တွေ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အားနာပေမယ့် အရမ်းစိတ်ဝင်စားတာမို့ နိုင်ငံကူးစာအုပ်နီနီလေး၊ E Visa ၊ လေယဉ်လက်မှတ် တွေကြည့်လိုက်တယ်ဗျာ။ဟာဗျာ ကိုယ် ဂရုနာသက် စိတ်ထိခိုက်မိတာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ ချာတိတ်ကို ကြည့်မိလျက်သားဖြစ်သွားပါတယ်။
နောက် ၄ရက်ဆို လေယဉ်လက်မှတ် သက်တမ်းကုန် ပြီး ဗီဇာက ၁ ပတ်အတွင်း သက်တမ်းကုန်တော့မှာ၊ နောက်တစ်ရွက်က ကျန်နေသေးတဲ့ သင်တန်းကြေးသွင်းရန်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ အောက်စာပိုက်မှာတော့ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ကို သင်တန်းကြေးသွင်းပြီးမှ ထုတ်ပေးမယ် ဆိုတဲ့ ကျောင်းတံဆိပ်ပါတဲ့ စာရွက်ပါ။
ချာတိတ်လေးနဲ့ ဗာသမ်၊ အင်ဒိုနီးရှားမှာ၂ည၃ရက်နေပြီး စကာင်္ပူအပြန်လမ်း လှေပေါ်ရောက်တော့ စလုံးဒေါ်လာ ၄၀၀ နဲ့ မုန့်ဘိုး ၂၀၀ ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဝမ်းသာလှတဲ့ မျက်ရည်တွေ သုတ်ပေးရင်းကိုယ်လည်း ဘာကြောင့်မသိပဲ အလိုလို မျက်ရည်ကျ လိုက်သေးတယ်ကွ။အဲဒီညက MAI နောက်ဆုံးလေယဉ်နဲ့သူ ရန်ကုန်ကို ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။
နောက် ၃နှစ်ကြာမြန်မာပြည်ကို အလုပ်ကိစ္စ လာဖြစ်တော့ ပြန်တွေ့ဖြစ်ကြသေးတယ်ဗျ။ ချာတိတ်က ပိုတောင် ချောပြီး အလုပ်အကိုင်တွေနဲ့ အဆင်ပြေနေပါပြီ သူအပြုအစုလည်း ပိုကောင်းလာတယ်လေ ။ သူနဲ့ အဆက်အသွယ် အမြဲလုပ်ရင်း သူ့အပြုအစုကို တစ်ခါတစ်လေ တမ်းတမိတာ ကိုယ်ဝန်ခံပါရစေ။ သူ့လောက်ကောင်းပြီး တော်တဲ့ချာတိတ် မတွေ့ဘူးတော့ လိုလည်း လိုချင်သေးတယ်ဗျာ၊ ရန်ကုန်ကို ပြန်လာဖြစ်ဦးမှာပါ ချာတိတ်လေး။
(စာရေးသူညီလေး တစ်ယောက်ရေးသားထားသော ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီး သူ့နာမည်မှာ သူ့ကိုယ်ပိုင် FB Page ကို လင့်ခ်ချိတ်ပေးထားပါတယ်)
Posted by Alex Aung at 5:26 PM